Ny miditra sy mivoaka ny Apple Pencil sy ny semiconductors dimy ambin'ny folo | Vaovao IPhone
Ny miditra sy mivoaka ny Apple Pencil sy ny semiconductors dimy ambin'ny folo
Ny iPad Pro malaza dia avy am-pelatanan'ny fitaovana iray izay namorona mpitia marobe toy ny mpanimba zavatra, ny Apple Pencil, ilay fitaovana izay tsy tokony natombok'i Steve Jobs ary sahy natomboka i Tim Cook. Ny Apple Pencil dia tsy inona fa tsy inona fa ny pensilihazo vita nomerika. Ny zazalahin'i Chipworks Mafana fo momba ny atin'ny fitaovan'ny Apple izy ireo, toy ny ohatra iFixit manala ny fitaovana Apple rehetra. Amin'ity fanadihadiana ity ny zazalahy Chipwork nandinika ny Apple Pencil mba hahitana hoe inona no mahatonga an'ity penina nomerika ity izay voaporofo fa tena marina indrindra eny an-tsena.
Hitan'izy ireo fa ny Apple Pencil manana semiconductors 15 isan-karazany, izay tena mahagaga raha mandinika ny haben'ny fitaovana isika, na ny lanjany ary ny hateviny 9mm ary ny halavany 176mm. Ireo chips ireo dia avy amina orinasa marobe, tsy mihidy eo anelanelan'ny Samsung sy TSMC. Nahita orinasa toa an'i Bosch, Fairchild, Cambridge Silicon Radio izahay. Na izany aza, ny ankamaroan'izy ireo dia omen'ny STMicorelectronics sy Texas Instruments.
Tsy misy isalasalana noho ity famerenana ity fa ny Apple Pencil dia sanganasa teknolojia an'io karazana io, na izany aza, Chipworks Nilaza izy fa tsy hijanona eto, tsy ho ela izy ireo dia handinika ny fiasan'ny Apple Pencil hahafantarana bebe kokoa momba azy io ary hahatakatra ny antony fiasan'izy io tsara kokoa noho ireo fitaovana mpifaninana aminy ihany, izay efa elaela ihany koa tao mpanondro. Tian'izy ireo ho fantatra ihany koa ny antony mahatonga ny Apple Pencil ho fitaovana miasa irery amin'ny iPad Pro. Mila miambina hatrany isika amin'ny tatitra manaraka avy amin'ireo tovolahy izay manao asa mahatalanjona amin'ny famakafakana lalina momba ny rafitry ny fitaovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Ny miditra sy mivoaka ny Apple Pencil sy ny semiconductors dimy ambin'ny folo
Semiconductors? Mihevitra aho fa midika hoe boriborintany tafiditra, sa tsy izany?
Ny Samsung Gear S2 dia hifanaraka amin'ny iOS amin'ity taona ity